Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Other • Safety • Vaovao momba ny dia any Seychelles • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Seychelles iray tamin'ny raharaha COVID-19 fahaefatra
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Seychelles iray tamin'ny raharaha COVID-19 fahaefatra
One Seychelles dia antoko politika any Seychelles eo ambany fitarihan'ny minisitry ny fizahantany teo aloha Alain St.Ange ary ny filohan'ny Birao fizahantany afrikanina.
Notsongaina ny antso nataontsika tamin'ny Governemanta Seychelles omaly ho an'ny fifanakalozan-kevitra misokatra eo amin'ny samy mpanao politika, ny Lehibem-panjakana sy ny tompon'andraikitra ary ny mpiara-miombon'antoka aminy mba hifanakalo hevitra sy hiombon-kevitra amin'ny hetsika fanamafisana eo noho eo mandroso rehefa miady amin'ny COVID-19 ny Firenentsika marefo. .
Ny antsontsika hatreto dia mbola tsy voavaly ary tsy eken'ny mpanao politika hafa, miaraka amin'ny filoham-pirenentsika izay mitohy miasa mitokana sy anaty aloka. Ny tahotra sy ny tebiteby tsapan'ny besinimaro dia tsy mitsaha-mitombo, miaraka amina orinasa maro, ary koa ny orinasam-panjakana sy ny governemanta, mandray an-tànana ny raharaha ary manidy ny varavarany mandritra ny tapa-bolana. Ireo mpampianatra ao amin'ny Praslin androany dia naneho hevitra ny amin'ny fisokafan'ny sekoly, raha ny andrim-panabeazana kosa manodidina an'i Mahé nanidy ny varavarany mba hampiroboroboana ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Ny firenena samihafa miankina amin'ny fizahan-tany dia nandray fepetra henjana mba hitehirizana sy hiarovana ny olom-pireneny amin'ny fanidiana ny sisin-tanin'izy ireo, ao anatin'izany i Maurice, nosy rahavavintsika. Mandritra izany fotoana izany, Seychelles dia manohy mandray mpitsidika isan'andro avy any Eropa, izay ivon-toeran'ny coronavirus. Seychelles dia tsy maintsy mifindra ankehitriny mba hampihenana ny fahatongavan'ireo mpizahatany avy any amin'ny faritra voan'ny coronavirus ary eo am-piasana hatrany hitazona ny asa aman-draharaha sy hanohy hanome asa ho an'ny mponina any Seychelles.
Miantso ny Antenimieram-pirenena izahay mba hamolavola maika ny fepetra fitsitsiana, amin'ny fifampidinihana amin'ny Seychelles Tourism Board, izay hiantohana ny fihazonana ny orinasa sy ny mpiasa Seychellois tsy ho very asa. Ny indostrian'ny fizahantany dia ampirisihina hanolotra safidy famandrihana indray, raha tsy te-hanolotra famerenam-bola izy ireo, ho an'ireo mpanjifa izay namandrika ny fonenany na ny valizy fitsangatsanganana alohan'ny areti-mandringana.
Raha mahatsapa ny tsindry hazo lena mifandraika amin'ny viriosy tonga hatrany amoron-tsiraka sy miditra amin'ny fiarahamonina miditra ny Firenena, ny hany làlana manorina dia ny fiezahana hanana firaisan-kina. Ny firaisankina no tanjantsika, ny fizarana no fahalementsika. Adidintsika ny laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fahasalamana sy ny filaminan'ny Vahoakany. Tsy maintsy miaro ny vahoaka amin'ny fiatraikany ara-toekarena amin'ity krizy ara-pahasalamana manerantany ity ihany koa; Ireo orinasa tantanin'ny fianakaviana ao amin'ny firenena miankina amin'ny fizahan-tany dia mila fanampiana amin'ny fiatrehana ny krizy.